संसद भङ्ग गर्ने अधिकार मेरै हो भन्ने कुतर्क गरेर पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
संसद भङ्ग गर्ने अधिकार मेरै हो भन्ने कुतर्क गरेर पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ९ पुष बिहीबार २०:०७
बहुमत ल्याएको नेकपाले हो । ओलीले जितेको आफ्नो एउटा सिट मात्रै हो । झापाका जनताले उनलाई सांसद बनाएका हुन् पाँच वर्षका लागि । यत्ति सत्य हो । र, सांसदका रूपमा काम गर्न उनलाई कसैले बाधा पुऱ्याएको थिएन । नेकपाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । नेकपाको बहुमत उनको पक्षमा नरहे उनले राजीनामा दिने हो, पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने होइन । हामीले उत्कृष्ट भनेको व्यवस्था नै यही हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली बपौती होइन, जुन उनले प्रचण्ड या माधव नेपाललाई टीका लगाएर दिन या नदिन सकून् । उनले दिने संसदलाई हो । पार्टीलाई हो ।
हिजो राजनैतिक स्थायित्वका लागि सजिलै पार्टी फुटाउन नपाइने बनायौं भन्ने र ताली खाने, अनि आफ्नो पालामा फुटाउने अध्यादेश ल्याउने ! हिजो लहड़को भरमा संसद भङ्ग नहोस् भनेर व्यवस्था गऱ्यौं भन्ने र ताली खाने अनि आज संसद भङ्ग गर्ने अधिकार मेरै हो भन्ने कुतर्क गरेर पनि हुन्छ र ?